Lawmhpi Cio Hna Usih: Aungla Nsang NihInternational Fighter Of The Year Akan Hmuh Piak – Myanmar Chin
January 14, 2020 Myanmar Chin Myanmar 0
Lawmhpi Cio Hna Usih ,Aungla Nsang Nih International Fighter Of The Year A Kan Hmuh Piak
Laimi zongh nih kan uar bak mi Kan Unau Kachin pa Aunhla Nsang nih International Fighter Of The Year 2019 cu sunglawi taktak iin akan lak piak than cang. Theih ning ahcun @sanfordmma ah traningatuah dih ah riuahlo piin @worldmmaawardsasimi 2019 caah International Fighter Of The Year laksong cualak tiah theihasi.
Aungla cuafim tuk ve iaMiphun kawlram mi sinah lawmmhnak biaachm colh. Nanmah nih Vote nan ka pek nak thawnginasi tiahati colh i,@fightersonlymag cung zongah lawmhnakachim.
Kum khat chungathiam bik sinak laksong cu UFC minthang Khabib lonh in Aungla nih alak hiasi. 2018 lio zong alak cg caah kum hnih peh in alak cang tinakasi.
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် International Fighter Of The Year ဆုကို ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်ရရှိ
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် International Fighter Of The Year ဆုကို ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ချန်ပီယံအောင်လအန်ဆန်က“ဒီနေ့မနက်@sanfordmmaမှာအသင်းဖော်တွေနဲ့လေ့ကျင့်မှု အပြီး မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ @worldmmaawards ဖြစ်တဲ့2019 International Fighter Of the Year ဆု တံဆိပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုကိုရရှိအောင်မဲပေးခဲ့ကြတဲ့မြန်မာပရိတ်သတ်တွေအားလုံးကိုအထူးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ @fightersonlymagကိုလဲကျွန်တော့်ကိုစကာတင်စာရင်းမှာ
ရွေးချယ် ပေးခဲ့ တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”လို့ သူ့၏ လူမှုကွန်ယက်က တစ်ဆင့်ပြောကြား ထားပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန် သည်(၂၀၁၉) အတွက် ရရှိခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်တာ နိုင်ငံတကာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုမှာ UFC က နာမည်ကြီး ကစားသမား ခါဘစ် ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရရှိခဲ့ပြီး ယင်းဆုကို (၂၀၁၈) ကလည်း ရရှိခဲ့တာကြောင့် (၂)နှစ်ဆက်တိုက် ဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ International Fighter Of The Year ဆုကို ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျရရှိ
၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ International Fighter Of The Year ဆုကို ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျရရှိခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။
ခနျြပီယံအောငျလအနျဆနျက“ဒီနမေ့နကျ@sanfordmmaမှာအသငျးဖျောတှနေဲ့လကေ့ငျြ့မှု အပွီး မမြှျောလငျ့ပဲနဲ့ @worldmmaawards ဖွဈတဲ့2019 International Fighter Of the Year ဆု တံဆိပျကိုလကျခံရရှိခဲ့ပါတယျ။ဒီဆုကိုရရှိအောငျမဲပေးခဲ့ကွတဲ့မွနျမာပရိတျသတျတှအေားလုံးကိုအထူးကို အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ။ @fightersonlymagကိုလဲကြှနျတေျာ့ကိုစကာတငျစာရငျးမှာ
ရှေးခယျြ ပေးခဲ့ တဲ့အတှကျကြေးဇူးတငျပါတယျ”လို့ သူ့၏ လူမှုကှနျယကျက တဈဆငျ့ပွောကွား ထားပါတယျ။
အောငျလအနျဆနျ သညျ(၂၀၁၉) အတှကျ ရရှိခဲ့တဲ့ တဈနှဈတာ နိုငျငံတကာ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုမှာ UFC က နာမညျကွီး ကစားသမား ခါဘဈ ကို ကြျောဖွတျပွီး ရရှိခဲ့ပွီး ယငျးဆုကို (၂၀၁၈) ကလညျး ရရှိခဲ့တာကွောငျ့ (၂)နှဈဆကျတိုကျ ဆုရရှိခဲ့တာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
Ka U Esther Cu Aa Dawh, A Ziaza ATha I A Aw A Tha Fawn